မိန်းမ ရှစ်ပါးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« I knew that Mg Mg had wrote this B4Meikhtila problem started…
အလ်ဟာဂ်ျ ဦးညွန့်မောင်သျှိန် ..”က၀ိပညာကျော်တို့၏ မျက်ရှု မြတ်တမန်” »
မိန်းမ ရှစ်ပါးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်
လက်ထပ်မယ်ဆို ဒီလို မိန်းမမျိုးတွေတော့ ရှောင်ကြဗျို့…
ထုံထုံထိုင်းထိုင်းနဲ့ ပြန်မပြော နားမထောင်တတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး၊ အထူအပါး နားမလည်တဲ့ ဒုံးဝေးတဲ့မိန်းမမျိုးပါ၊ တခြား အိမ်သူသက်ထားတွေရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြပုံတွေကို မြင်နေ တွေ့နေလည်း အတုယူရကောင်းမှန်းမသိ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဆိုလည်း အင်မတန် ပျင်းရိပြီး လေးတိလေးကန်နိုင်ပါတယ်၊ တီဗီကြည့်နေချိန်များဆို ခေါ်မကြား အော်မကြားပါပဲ၊ အိပ်ပြီးဟေ့ဆို နေဖင်ထိုးတဲ့အထိ ကြာတတ်ပါတယ်၊ ယောက်ျားရှာဖွေလာသမျှဆို အကုန်ကိုယ့်အိတ်ထဲထည့်၊ ပြီးရင် ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ အိမ်သားတွေကို တစ်ချက်ကလေးတောင် အဖက်မလုပ်တတ်၊ လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးပါ။
ဘယ်အပေါက်ကနေ ဘယ်လိုနှိုက်ရမလဲပဲ ချောင်းနေတဲ့ မိန်းမမျိုးပေါ့၊ ငါ့ယောက်ျားဆီက စိန်နားကပ်ရအောင် ဘယ်လိုခြူရမလဲ၊ ယောက္ခမကြီးဆီက အတွင်းပစ္စည်းတွေ ငါတစ်ယောက်တည်း မောင်ပိုင်စီးရအောင် ဘယ်လိုဖားရမလဲပဲ တွေးနေ၊ ကိုယ့်ယောက်ျားမှာ ရှိလား မရှိလား နည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်၊ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်၊ ပြီးရင် လူမြင်ကောင်းအောင်၊ စေတနာရှိချင်ယောင်ဆောင်ပြ၊ နည်းနည်းပဲပေးပြီး ရသမျှအခွံပါချွတ်ယူတဲ့ မိန်းမမျိုးပေါ့။
အိမ်အလုပ်လုပ်ပါဆိုတော့လည်း မလုပ်ဘူး၊ ဒါဖြင့် အပြင်ထွက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာဆိုတော့လည်း မရှာနိုင်ဘူး၊ အိမ်မှာနေပြီး ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်၊ ကိုယ့်ယောက်ျားလည်း အကောင်းမပြော၊ ယောက္ခမကိုလည်း အမြင်မကြည်၊ သမီးယောက်မချင်းလည်း မတည့်၊ လမ်းထိပ်က ခွေးနှစ်ကောင် ကိုက်လည်းသူပါ၊ ကြောင်သုံးကောင် ပေါက်လည်းသူပါ၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်နဲ့ ယောင်စိန်လို မိန်းမမျိုး။
ချစ်လှစွာသော ယောက်ျားရေ ဆိုပြီး လေချိုအေးလေးနဲ့ အမြဲပြော၊ ပြီးရင် ကိုယ့်ယောက်ျားကို ဘာမှ မတိုင်ပင်ဘဲ သူလုပ်ချင်ရာလုပ်၊ အိမ်က စီးပွားရေး မွဲပြာကျမှ အတွင်းပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်း၊ တီဗီတွေ၊ လုံချည်တွေလိုက်ပေါင်၊ ဟိုအမျိုးနားက ပိုက်ဆံချေး၊ ဒီမိတ်ဆွေကို ကူပါ ကယ်ပါပြော၊ ကိုယ့်အိမ်သားတွေကတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်၊ နောက်ဆုံး မွှေချင်တိုင်းမွှေပြီး ရှင်းလည်းမရရော ဒီအတိုင်းထားသွားပြီး ဘိုးဘွားရိပ်သာ ဝင်သွားရော။
ယောက်ျားက တစ်ချိန်လုံး ဒူးတုန်အောင် ကြောက်နေရတဲ့မိန်းမမျိုး၊ ကိုယ့်ယောက်ျား ရယ်လို့လည်း မျက်စိထဲမမြင်၊ သားသမီးလည်း ခေါင်းထဲမထည့်၊ တချိန်လုံး ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်း၊ တစ်လောကလုံးက သူ့လုပ်စာ ထိုင်စားနေရတဲ့ မျက်ခွက်နဲ့နေ၊ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အိမ်သားတွေကို ကြိမ်းမောင်းရုံတင်အားမရဘဲ လက်ပါ ပါ၊ တွေ့တဲ့ဟာနဲ့ကောက်ထု၊ ငါက ဒါဆို ဒါဟဲ့ ပြန်မပြောနဲ့ ငါလုပ်ထည့်လိုက်မယ် လို့ တစ်ချိန်လုံးအသံကောင်းဟစ်နေတတ်တဲ့ မိန်းမကြမ်းမျိုးပေါ့ဗျာ။
ဟောင်ပွာဟောင်ပွာနဲ့ ပွစိပွစိအမြဲလုပ်၊ ပြောစရာရှိရင် ရှေ့နောက် မစဉ်းစား၊ မဆင်ခြင်၊ အရပ်တကာလှည့်ပြီး အိမ်ပေါက်စေ့က အတင်းကိုပြော၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာ သူမသိတာမရှိ၊ သိသမျှလည်း အကုန်ပြန်ဖွ၊ ကိုယ့်အိမ်အကြောင်း၊ ကိုယ့်ယောက်ျားအကြောင်းလည်း အပြင်ကို အကုန်ဖောက်သည်ပြန်ချ၊ ဘယ်အရာမဆို တစ်ဆိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်လွန်းပြီး ပုံကြီးချဲ့တတ်တဲ့၊ အင်မတန်နားပူတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးပေါ့ဗျာ။
ဘာအလုပ်ကိုမှ လက်ကြောတင်းအောင် လက်တွေ့မလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ယောက်ျားကိုတော့ အမြဲတမ်း ဆရာကြီးအထာနဲ့ ပြောတတ်တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အိမ်မှာ ကြော့ကြော့မော့မော့လေးနေမယ်၊ ပြီးရင် ဘိလပ်က တတ်ကျမ်းတွေ တဖြဲနှစ်ဖြဲထိုင်ဖတ်မယ်၊ စာသားတွေအလွတ်ကျက်မယ်၊ ဟော…တကယ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ ယောက်ျားလုပ်သူ အလုပ်က ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ ခေါင်းလေးတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ leadership က ဘယ်လို၊ management က ဘယ်ကဲ့သို့ဆိုပြီး ဖတ်ထားသမျှတွေ ခဝါချမယ်၊ ပြောလို့လည်း မောရော ယောက်ျားရေ See you in the bed ဆိုပြီး ထွက်သွားပါလေရော။
(အဆိုးမြင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စော်ကားလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အပျော်သက်သက်ပါ).
(Wai Phyo Maung)
This entry was posted on October 21, 2014 at 9:25 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.